Iindaba -Cacisa uxanduva, ukomeleza uxanduva, kunye nokwenza izibonelelo
Ukuvavanywa kokusebenza kwendibano nganye yenye yeendlela zenkampani kunye neenzame ezibalulekileyo ekuhlaziyweni kwemivuzo yenkampani. Kuphela kwendlela yokunciphisa iindleko kunye nokuphucula ukhuphiswano lwenkampani. Ixabiso lezinto ezisetyenzisiweyo likhuphuke kakhulu, kwaye unikezelo lwamandla kunye nokunqongophala kwamanzi kube ngumceli mngeni kumashishini. Kufuneka senze iingqondo zethu ukwenza umsebenzi olungileyo wokuvavanya ukusebenza kumasifundisane kwaye sandise ukusebenza kakuhle kukamasifundisane ukuze inkampani ibenendlela yokuphuma. Isicwangciso sovavanyo simisela iinjongo ezintathu: isiseko, injongo ecwangcisiweyo, kunye nenjongo elindelekileyo. Kwithagethi nganye, izikhombisi zenqanaba lokuqala ezinje ngemveliso, indleko, kunye neakhawunti yenzuzo ngama-50%, kunye neethagethi zolawulo ezinje ngomgangatho, imveliso ekhuselekileyo, inguqu kwezobuchwepheshe, kunye neakhawunti yemveliso ecocekileyo engama-50%. Xa iinjongo zibekiwe, abalawuli beworkshop bayacelwa ukuba basebenze nzima.
Ukuze amashishini aphuhlise ekuhambeni kwexesha, kufuneka basebenzise izakhono zabo zangaphakathi, baqwalasele abaphathi, kwaye banike ubunzima obulinganayo kwimveliso kunye nomgangatho. Ukudityaniswa kwezi zimbini akunakucalula. Bonke abalawuli beeworkshop kufuneka bayenze benesimo sengqondo esifanelekileyo, bathathe zonke izalathiso zovavanyo ngokungathí sina, bamkele uvavanyo lwenkampani, kwaye baseke inkqubo yembuyekezo ejolise ekusebenzeni.
Uvandlakanyo lwentsebenzo lonyaka lomlawuli weworkshop yiyunithi encinci yokunika ingxelo edibanisa unyango kunye nokuvavanywa kokusebenza ukwenza umsebenzi womlawuli kamasifundisane ucace ngakumbi kwaye izibonelelo ziqonde ngokuthe ngqo, ukwenzela ukwandisa umdla womsebenzi kunye nokusebenza kwenkampani. Ndiyathemba ukuba ngokuqhubeka siphucula inkqubo yovavanyo lwentsebenzo, sinokuqinisekisa ukuba iinjongo zalo nyaka zigqitywe ngempumelelo. Kuyathenjwa ukuba umlawuli kamasifundisane angazisebenzisa kakuhle izixhobo zenkokeli yeqela kunye nabasebenzi kwaye asebenze nzima ukudala imeko entsha emsebenzini.